Su'aalaha La Weydiiyo - Shirkadda Shenzhen Dianyang Technology
Waa maxay Teknolojiyada Sawirka kuleylka?
Marka la soo koobo, sawirka kuleylka waa habka isticmaalka heerkulka sheyga si loo soo saaro sawir. Sawir qaadeyaasha kuleylka waxay ku shaqeeyaan iyagoo ogaanaya oo cabiraya qadarka shucaaca infrared-ka ee soo baxa oo ka tarjumaya walxaha ama dadka si muuqaal ahaan u bixinaya heerkulka. Kaamerada kuleylka waxay adeegsaneysaa aalad loo yaqaan microbolometer si ay u soo qaadato tamartaan meel ka baxsan inta u dhexeysa iftiinka muuqda, dibna ugu laasho daawadayaasha muuqaal muuqaal ah oo si cad loo qeexay.
Waa maxay "Saxiixyada kuleylka"?
Erayada ugu fudud, saxiixa kuleylka waa matalaada muuqata ee heerkulka banaanka ee shay ama qof.
Waa maxay dhawaaqa gujinaya?
Looma baahna in laga walwalo, tani waa sawaxanka ay kamaradaadu samaynayso inta aad u kala wareejinayso qaybaha kala duwan ee aragtida. Qaylada aad maqleysaa waa kamarada diiradda saareysa iyo hagaajinta sawirka si loo gaaro xalka ugu sarreeya ee suuragalka ah.
Waa maxay aaladaha heerkulka shaqeynaya ee nabdoon?
Waa maxay kala duwanaanshaha ogaanshaha aaladaydu?
TIC-gaagu wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado heerkulka meel kasta oo u dhexeysa -40 ° F illaa 1022 ° F.
Qalabku ma yahay mid biyuhu xireen?
Qalabku wuxuu leeyahay IP67 Rated casing, taas oo macnaheedu yahay in la caddeeyay inuu iska caabin karo walxaha boodhka iyo biyaha quusin, laakiin kaliya wakhti xaddidan oo ah ugu qoto dheer 3.3ft. Hubso in albaabka dambe ee rabadhka ahi gebi ahaanba xidhan yahay oo xidh xidhan yahay ka hor intaadan sii wadin si aad u sii yaraysid fursad kasta oo ay biyuhu ku galaan gudaha TIC-gaaga.
Miyaan Ku Kicin Karaa Mise Xidhan Karaa?
Haa. Dhammaan aaladaha Muujinta waxaa loogu talagalay inay si fudud ugu xirmaan ama ugu xirmaan suumanka korantada iyo dharka caadiga ah.
Sideen ugu heli karaa / u beddeli karaa luqadda Qalabkayga?
Marka ugu horeysa ee aad sameysid TIC, waxaa lagaa doonayaa in aad doorato luqad aad dooratay si aad u daawato macluumaadka. Haddii wakhti kasta aad u baahato inaad wax ka bedesho, waxaad aadi kartaa Menu> Aaladda> Luqadaha, ama waxaad dib ugu soo celin kartaa aaladda meelihii ay ku shaqeyn jirtay oo dib loogu soo celin doonaa bogga xulashada luqadda.
Sideen ku heli karaa liiska cuntada?
Farqi u gaar ah dhammaan moodooyinka kale ee taxanaha ayaa ah XARUNTA badhanka ma soo galo menu. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso naftaada xitaa ma jiraan menu? Jawaabtu waa dabcan, haa. Si aad u hesho marinka, isku mar riix labada BIDIX iyo XAQ badhanka ku hay oo hayso ugu yaraan hal sekan. Kadib waxaa laguu wareejin doonaa shaashadda menu.